ချစ်သူကို ရူးမတတ်လွမ်းနေတုန်းပါပဲလို့ ရင်ဖွင့်လာတဲ့ နီလန်း - CeleLove
လူတွေတော်တော်များများက Strong Girl လို့ ပြောကြပေမယ့်လည်း နှလုံးသားက ထင်ထားသလောက် မမာဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အချိန်တွေ ကြာပေမယ့်လည်း ချစ်သူကို ရူးမတတ်လွမ်းနေတုန်းပဲတဲ့ …. ။
အသံချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်ထားနိုင်တဲ့ Myanmar Idol Season3ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ နီလန်းဟာ ချစ်သူကို လွမ်းဆွတ်သတိရလို့ နေပါတယ် … ။
သူမကို အားလုံးက Strong Girl တစ်ယောက်လို့ မြင်ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ နှလုံးသားက ထင်ထားသလောက် မမာဘူးဆိုပြီး ရင်ဖွင့်ထားတာတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် … ။
“လူတွေ တော်တော်များများက ပြောကြတယ် “Strong Girl” လို့ ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိပေမယ့် နင့်ကိုလွမ်းရတာ ရူးမတတ်ပါပဲ ငါ့နှလုံးသားက နင်ထင်ထားသလောက်မမာဘူး … ။ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီ … ။
နင့်အတွက်လုပ်ထားတဲ့သီချင်းလေးလည်း ခုထိအဆင်မပြေနိုင်ဘူး … ။ I’m so stress” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ဇွန်လ(၂၃) ရက်နေ့က ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ် .. ။ နီလန်းရဲ့ ချစ်သူဟာ နီလန်း ပြိုင်ပွဲဝင်နေချိန်မှာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် … ။
ဒါပေမယ့်လည်း နီလန်းဟာ ပြိုင်ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ် .. ။
ပြိုင်ပွဲတုန်းကသူမရဲ့ ချစ်သူကို သတိရပြီး သီဆိုထားတဲ့ အိမ်အလွမ်းဆိုတဲ့ သီချင်းကို နားထောင်းရင်း ပရိသတ်တွေရော ဒိုင်တွေပါ မျက်ရည်ကျတဲ့အထိ ခံစားခဲ့ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ် .. ။
သူမရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဟာ တကယ့်ကို စို့နင့်ဖွယ်ကောင်းလွန်းလှပါတယ် .. ။
သူမခံစားနေရတာကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေကပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့နေပါတယ် … ။ နီလန်းကတော့ လက်ရှိမှာ ပရိသတ်တွေအတွက် သီချင်းအသစ်တွေကိုလည်း ဖန်တီးနေတယ်လို့ သိရပါတယ် …. ။
နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတချို့ကို Cover Song အနေနဲ့ ပြန်လည် သီဆိုထားတဲ့ နီလန်းရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကလည်း ပရိသတ်အားပေးမှု အများကြီးရခဲ့ပါသေးတယ် … ။
နီလန်းဟာ အဆိုတော်တစ်ယောက်မဖြစ်ခင် Beauty Blogger တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ် … ။
ခဈြသူကို ရူးမတတျလှမျးနတေုနျးပါပဲလို့ ရငျဖှငျ့လာတဲ့ နီလနျး
လူတှတေျောတျောမြားမြားက Strong Girl လို့ ပွောကွပမေယျ့လညျး နှလုံးသားက ထငျထားသလောကျ မမာဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။ အခြိနျတှေ ကွာပမေယျ့လညျး ခဈြသူကို ရူးမတတျလှမျးနတေုနျးပဲတဲ့ …. ။
အသံခြိုခြိုအေးအေးလေးနဲ့ ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျထားနိုငျတဲ့ Myanmar Idol Season3ပွိုငျပှဲဝငျ တဈဦးဖွဈတဲ့ နီလနျးဟာ ခဈြသူကို လှမျးဆှတျသတိရလို့ နပေါတယျ … ။
သူမကို အားလုံးက Strong Girl တဈယောကျလို့ မွငျပမေယျ့လညျး သူမရဲ့ နှလုံးသားက ထငျထားသလောကျ မမာဘူးဆိုပွီး ရငျဖှငျ့ထားတာတှရေ့တာပဲဖွဈပါတယျ … ။
“လူတှေ တျောတျောမြားမြားက ပွောကွတယျ “Strong Girl” လို့ ဟုတျလားမဟုတျလားတော့မသိပမေယျ့ နငျ့ကိုလှမျးရတာ ရူးမတတျပါပဲ ငါ့နှလုံးသားက နငျထငျထားသလောကျမမာဘူး … ။ အရမျးပငျပနျးနပွေီ … ။
နငျ့အတှကျလုပျထားတဲ့သီခငျြးလေးလညျး ခုထိအဆငျမပွနေိုငျဘူး … ။ I’m so stress” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျမှာ ဇှနျလ(၂၃) ရကျနကေ့ ရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ .. ။ နီလနျးရဲ့ ခဈြသူဟာ နီလနျး ပွိုငျပှဲဝငျနခြေိနျမှာ ဆုံးပါးသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ … ။
ဒါပမေယျ့လညျး နီလနျးဟာ ပွိုငျပှဲမှာ အကောငျးဆုံး ယှဉျပွိုငျနိုငျခဲ့ပါတယျ .. ။
ပွိုငျပှဲတုနျးကသူမရဲ့ ခဈြသူကို သတိရပွီး သီဆိုထားတဲ့ အိမျအလှမျးဆိုတဲ့ သီခငျြးကို နားထောငျးရငျး ပရိသတျတှရေော ဒိုငျတှပေါ မကျြရညျကတြဲ့အထိ ခံစားခဲ့ကွရတာပဲဖွဈပါတယျ .. ။
သူမရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးဟာ တကယျ့ကို စို့နငျ့ဖှယျကောငျးလှနျးလှပါတယျ .. ။
သူမခံစားနရေတာကို ကွညျ့ပွီး ပရိသတျတှကေပါ စိတျမကောငျးဖွဈလို့နပေါတယျ … ။ နီလနျးကတော့ လကျရှိမှာ ပရိသတျတှအေတှကျ သီခငျြးအသဈတှကေိုလညျး ဖနျတီးနတေယျလို့ သိရပါတယျ …. ။
နာမညျကြျောအဆိုတျောတှရေဲ့ သီခငျြးတခြို့ကို Cover Song အနနေဲ့ ပွနျလညျ သီဆိုထားတဲ့ နီလနျးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေလညျး ပရိသတျအားပေးမှု အမြားကွီးရခဲ့ပါသေးတယျ … ။
နီလနျးဟာ အဆိုတျောတဈယောကျမဖွဈခငျ Beauty Blogger တဈယောကျအဖွဈ ရပျတညျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ … ။
အသက် (၈၅)နှစ်အရွယ် အဖွားအိုကို အဓမ္မကျင်ပြီး သတ်သွားတဲ့အမျိုးသားကို ကြိုးပေးဖို့တောင်းဆိုနေ
နှင်းဆီလှေ အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဖေ့ဘုတ်ဆယ်လီလေး ကိကိပုံစံ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ နေတိုးရဲ့ ချစ်စရာ ဗီဒီယိုလေး